Esona Sixhobo sokuThengisa siBalaseleyo! | Martech Zone
Hayi, andizukutyhila itekhnoloji entsha enkulu kwaye emangalisayo, iwebhusayithi, okanye enye intengiso yesibhengezo esiza kuyirokrisa inkampani yakho kubume obukhulu.
Ndithetha ngoku inkonzo enkulu yabathengi. Kubonakala kucacile ukuyithetha loo nto. Wonke umntu uyazi ukuba inkonzo enkulu yabathengi yindlela eqinisekisiweyo yokukhulisa ishishini lakho, kodwa kwinto endiyibonileyo, iinkampani ezininzi ziyilibele. Ukuba abayilibalanga, ubuncinci baphoswa lithuba lokuvumela amazwi abathengi babo abonwabileyo ukuba bakhulise ishishini labo.
Wonke umntu unebali lakhe elothusayo malunga nenkonzo yabathengi kwaye wonke umntu unebali lakhe lenkonzo enkulu yabathengi. Njengabathengisi, kufuneka sikhumbule ukuba la mabali abaliswa yonke imihla kwabo banokuba ngabathengi kunye nabaxumi. Kwaye ngoku-imithombo yeendaba zentlalo izikhulisile ezi ngxoxo!
Inkonzo yomthengi inamandla okusika zombini iindlela. Eli bali libi linamandla okuthumela amathemba amatsha kunye nabathengi abakhoyo kwabo ukhuphisana nabo. Eli bali libalaseleyo linokuzisa abathengi abatsha kunye nokwanda kwentengiso. Kungumsebenzi wakho ukuphucula inkonzo yabathengi ukuze uthulise okubi, kwaye ubonelele nge-bullhorn ukukhulisa okuhle!
Ke siqinisekisa njani ukuba ibali liyabaliswa? Mva nje, ndibone iindlela ezingabizi kakhulu, nezisebenzayo zokuqinisekisa ukuba ibali liyaxelwa. Enye inkampani endiyaziyo ivumela abathengi ukuba babhale kwaye bathumele amabali abo kwibhlog yenkampani kwaye babelane nabo nabani na ozimisele ukufunda.
Ezinye iinkampani ziqalise uthungelwano lwabathengi kwi Iqonga Ning. Basebenzisa ezi nethiwekhi njengesiseko solwazi, iforum, idesika yokunceda kunye nendawo yobungqina yonke into inye. Yindlela elungileyo yokudibanisa amava abathengi kunye nokupeyinta ibali eliyinyani lenkonzo enkulu yabathengi kwinkampani yakho.
Ke wenza ntoni ukuze uqiniseke ukuba ithemba lakho liza kuva malunga nenkonzo yakho enkulu kubathengi?
Iimpahla zikaDick zemidlalo yokuqhuba iMithombo yeendaba yoLuntu nge-imeyile
Amanyathelo ama-5 eNethiwekhi yokuNxibelelana kwabaSebenzi beNtengiso
Nov 11, 2009 ngo-2:15 PM
Enkosi, enkosi, enkosi. Ndiyakholelwa ukuba indlovu kwigumbi kunye nayiphi na ingxoxo yeteknoloji iya kuhlala ingalibali ngabantu ofuna ukusebenzisa iteknoloji yakho. Ukuba uyalibala ngabantu ke yonke itekhnoloji enkulu emhlabeni ayinakwenza umbono wakho ube nenzuzo okanye ube luncedo.
Nov 14, 2009 ngo-7:40 PM
Julie, Enkosi! Ndiyavuma, itekhnoloji ilungile kuphela njengomntu oyisebenzisayo.
Nov 11, 2009 ngo-7:01 PM
Oku akunakuthethwa ngokwaneleyo. Kwaye iinkampani azikayifumani. Le yinto esiqala ukuthetha ngayo ngakumbi kwibhlog yethu, kwaye siza kugrumba nzulu malunga nokuba iinkampani zinokuhamba njani ukusuka kwintengiso yemidiya yoluntu ukuya kwinkonzo yabathengi bemidiya yoluntu, kodwa ndicinga ukuba inyathelo lokuqala kukukhumbuza iinkampani. ukuba inkonzo yabathengi sesona sixhobo sokuthengisa ngaphandle apho.
Nov 12, 2009 ngo-2:07 PM
Ndiqaphele ukuba iinkampani ezikhathalayo ngenkonzo yabathengi sele ziqalisile ukusebenzisa imidiya yoluntu ngokufanelekileyo. Ukusuka ekudwelisweni kwiisayithi zokuphonononga ukuya ekuphenduleni imibuzo abanokuthi abathengi babe nayo, kunye nokuvuma esidlangalaleni izikhalazo zemveliso kunye nezisombululo zabo. Kuyavunywa ukuba, kusekude ukuba kuhanjwe ngaphambi kokuba isasazeke.
Nov 12, 2009 ngo-11:00 PM
Watsho kakuhle uAdam. Ivili aliphindi liqalwe, liyabunjwa ukuze kube lula ukuhamba. —UPawulos
Nov 14, 2009 ngo-7:38 PM
Nov 15, 2009 ngo-3:04 AM
Inkonzo yabathengi yenye yezinto ezihlala zixatyiswa kwaye zixatyiswa kakhulu. Kodwa okwangoku ndingathanda ukubabona beflip-flopped. Ukuba nodumo oluhle lwenkonzo yabathengi kunika iinkampani inkululeko xa zityibilika. Kodwa bayifumene loo latitude.
Ezinye iinkampani zibonakala ziphosakele ngenxa yenkonzo yabathengi kuba azinalawulo oluthe ngqo. Nangona kunjalo uchanekile xa usithi sesona sixhobo sikhulu sokuthengisa, ngakumbi xa ufaka igama elinqwenelekayo lomlomo.
NgoJanuwari 18, 2010 ngo-6:46 PM
Nangona kubonakala ngathi kufanele kucace ukuba kufuneka ube nenkonzo elungileyo yabathengi, kuyabonakala ukuba akunjalo, ukugweba ngokuba zimbalwa kangakanani iinkampani ezinenkonzo elungileyo.
uTom- Eye Associates